काठमाडैा, ५ साउन नेपाली सिनेमाका लागि ओभरसिजमा बजार खोज्ने उद्देश्यका साथ विकास वोर्ड नेपालीहरुको उलेख्य बसोवास रहेको म्यानमार जाने भएका छन् । पर्सि आइतवार त्यता जाने कार्यक्रम भएतापनि विविध कारणले गर्दा उक्त कार्यक्रम आउँदो अगस्ट २ तारिखमा सरेको छ । यो टोली म्यानमारको
कुनै समय दिनको दुई–तीन वटा सिनेमाको सुटिङमा व्यस्त हुने महानायक राजेश हमाल आजकाल फूर्सदमा छन् । अहिले उनी कुनै सिनेमाको सुटिङ गरिरहेका छैनन् । उनको दैनिकी दिउँसोतिर कार्यक्रमहरुमा सहभागी हुँदैमा बित्ने गरेको छ भने साँझ उनी छायाँकन सकिएका सिनेमाको डबिङमा हुन्छन् । राजेश हमालका सहयोगीका अनुसार हमालले तत्काल कुनै सिनेमा साइन गरेका छैनन् ।
निर्माता सुनिल मानन्धरले निर्माण गरेको चलचित्र मायाज वारमा नायिका निशा अधिकारी र करिश्मा मानन्धरको जलवा देखिने भएको छ । निशा र करिश्माको जवानी सिनेमाको पर्दामा छताछुल्ल पोखिएको देख्न सकिन्छ । दिनेश डि.सिले निर्देशन गरेको यो सिनेमामा नायक राजेश हमाल खलनायकको भूमिकामा देखिएका छन् ।
काठमाडौं, जेठ ९ - सुरज सुब्बाद्वारा निर्देशित फिल्म 'सायद'को स्त्रिरकप्ट भारतीय कम्पनीले ५१ लाख रुपैयाँमा किनेको समाचार गलत साबित भएको छ।जसले किनेको भनिएको हो, उनैले यो हाउगुजी समाचारको खण्डन गरिदिएका हुन्। सिलिगुडी बस्ने टिकम
‘लास्ट किस’को सेन्सर झमेला
नेपाली सिनेमामा अश्लिल संवाद र दृश्य बढ्दै गएपछि सेन्सर बोर्डले पनि कडाई गर्न थालेको छ । चलचित्र चपली हाईट अश्लिल शब्द र सेक्स सिनकै कारणले व्यापारिक रुपमा सफल भएपछि अहिले यस्ता किसिमका सिनेमा बनाउनेहरुको होड नै लागेको छ । यसैले
बार डान्सर करिश्मा
करिश्मा मानन्धर अनि बार डान्सर ! झट्ट सुन्दा अचम्म लाग्छ, तर यो सत्य हो। छायांकनको क्रममा रहेको चलचित्र 'मायाज बार' मा करिश्मा बार डान्सर बनेकी छिन्। करिश्माले आफ्नो अभिनय करियरमै पहिलो पटक बार डान्सर बन्ने निर्णय गरेकी हुन्। दिनेश डिसीले निर्देशन गरिरहेको यो चलचित्रको एउटा आइटम गीतमा करिश्माले बारमा आकर्षक नृत्य गरेकी छिन्। पुतलीसडकस्थित स्टार मलमा तयार बारको आकर्षक
नेपाली चलचित्र हेर्ने दर्शकले नयाँ स्वाद खोजेको लूट देखि चपली हाईट सम्म रिलिज भएका सिनेमाले प्रस्ट्याएको छ । खासगरी भन्नु पर्दा छाडा शब्दको प्रयोग र नाङ्गिएका सिनले दर्शकलाई हलसम्म तान्ने 'लूट' र 'चपली हाईट' ले देखाए । जसरी लूटले एक किसिमको आश जगाएको थियो त्यो भन्दा बढि चपली हाईटले देखाएको छ ।शुक्रबारबाट प्रदर्शनमा आएको चलचित्र 'चपली हाईट' हेर्न बिशेष गरी युवावर्गको भिड देखियो । लूट हेर्न महिला दर्शक शुरूमा कम देखिएको थियो तर चपली हाईट हेर्न भने महिला दर्शक बढि देखिएको छ । चलचित्रमा प्रयोग गरिएका डाईलग र सिन हेरेर जति पुरूष दर्शक हाँस्थे त्यो भन्दा बढि महिला दर्शक हाँसेको पाईयो...।
लुट ओभरसिज ग्रस् साढे २२ लाख
‘लुट’ले अष्ट्रेलियामा बुधबारसम्म २२ लाख ६८ हजार ग्रस आम्दानी गरेको छ । सिड्नीका पाँच सोबाट सिनेमाले उक्त रकम कलेक्सन गरेको हो । ‘लुट’का अन्तराष्ट्रिय प्रदर्शन संयोजक तथा निर्देशक निश्चल बस्नेतले यसको पुष्टि गरे । मंगलबारसम्म तीनवटा सो भैसकेको छ भने बाँकी दुई सोका सबै टिकट सोल्डआउट भैसकेका छन् । ती सबै सो सिड्नीका मात्र हुन् । अष्ट्रेलियाका अन्य सहरमा बाँकी नौ सो स्क्रिनिङ हुँदैछन् ।
प्रेम सोचेर हुने चिज होइन
भुवन केसी, नायक तपाईले बनाउने फिल्म बन्ने क्रममा नै चर्चामा आउँछन् किन ? म फिल्म बनाउादा जे पायो त्यही बनाउादिन, सोचेरै बनाउाछु । त्यसैले गर्दा समय लाग्छ । जे पनि राम्रो गर्नको लागि समय त लाग्छ नै पैसा पनि लाग्छ साथमा मेहनत पनि पर्छ । समय र मेहनत लगाएर गरेको चिज राम्रो त हुन्छ नै ।